Bedelka Content ka iPhone in Google Nexus 6 habsami leh
Google ayaa waxa qasdigiisu telefoonka ugu dambeeyey - Google Nexus 6 dambeyntii soo gaaray. Phone Tani weyn ku qalabeysan yahay Android 5.0 hurdiga ah, iyo waxa uu dhisay-in RAM 3GB u 32GB iyo 64 daydo GB. Qodobbadani weyn oo aad rabto inay iska ilaawaan hore iPhone u Google Nexus 6? Beddelidda telefoonka ah waa fud. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado in content kala iibsiga, wax uu noqonayaa mid yara adag. In this article, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego sida loo helo waa iyada oo la faahfaahin.
1. toobiye: Content Transfer ka iPhone in Nexus 6 1 Click (120 daqiiqo, <10 daqiiqo)
2. Free Siyaabaha kala iibsiga xogta ka iPhone in Nexus 6 (120 daqiiqo)
Music 2.1 Transfer iyo Video ka iPhone in Nexus 6 (10 daqiiqo)
2.2 Kalandarada Transfer iyo Xiriirada ka iPhone in Nexus 6 (10 daqiiqo)
2.3 SMS Transfer ka iPhone in Nexus 6 (20 daqiiqo)
2.4 Transfer Photos ka iPhone in Nexus 6 (10 daqiiqo)
2.5 Transfer iPhone Apps in Google Nexus (60 daqiiqo)
1 Click si ay u gudbiyaan Data ka iPhone in Nexus 6 la MobileTrans
Hel ka daaleen ka eegay Internet-ka in ay raadiyaan habab lacag la'aan ah si ay u gudbiyaan music, video, sawiro, xiriirada iyo ka badan oo ka iPhone in Nexus 6 mid kale ka dib? Halkan waa qaab ka soo baxay. Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac aad u saamaxaaya in ay jadwalka taariikhda, video, photos, music, fariimaha qoraalka ah iyo xiriirada wareejiyo ka iPhone in MobileTrans 1 click.
1.Contacts in account: Wondershare MobileTrans wareejin karaan xiriirada on Twitter, Facebook, Google iyo xisaab oo ay taageerayaan aad iPhone. Sidaa darteed, fadlan hubi in aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xiriirada iyo kalandar in xisaabaadka ama aan. Haddii ay haa tahay, fadlan saxiix ee xisaab adiga ku iPhone. 2. Kaabta iyo soo celinta: Isticmaal hab marka aad hal telefoonka gacanta. Just xog gurmad aad iPhone in computer via Lugood ama MoibleTrans, iyo celin doonaa Google Nexus 6 mar kasta oo aad u baahan tahay.
Tallaabada 1. Run MobileTrans on your computer
Si aad u bilaabaan oo leh, download iyo rakibi Wondershare MobileTrans aad Windows PC. Waxa maamula. In uu furmo suuqa hoose, dooran Phone in hab Transfer Phone.
N ote: Lugood waa in lagu dhejiyaa in la damaanad qaado in Wondershare MobileTrans si sax ah u shaqeeyo.
Tallaabada 2. Isku Your Old iPhone iyo Google Nexus 6 ilaa Computer
Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan weynba aad iPhone iyo Google Nexus 6 ilaa computer. Marka xiran, ay la soo bandhigi doonaa suuqa kala iibsiga telefoonka.
Tallaabada 3. Start si ay u gudbiyaan iPhone in Google Nexus 6
Sida aad ka arki, Wondershare MobileTrans awood aad si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha, jadwalka taariikhda, video, sawiro iyo music ka iPhone in Nexus 6. Hubi waxa aad rabto si ay u gudbiyaan dhexe. Markaas, riix Start Copy si ay u bilaabaan kala iibsiga.
Bedelka Music Video iyo ka iPhone in Nexus 6
La soo iibiyo tan oo heeso iyo videos fairsounding ka Lugood oo aad rabto in aad u wareegto Nexus 6. Halkan waa qaab ka soo baxay.
Tallaabada 1. Open Lugood. Riix Store > ogolaato Computer Tani ... . Buuxi ID Apple iyo password aad.
Tallaabada 2. Tag Edit > Xulasho ...> Advanced > sax Hayso Lugood Media Folder abaabulan iyo files Copy in Lugood Media folder markii isagoo intaa ku daray in librar y.
Hel Tallaabada 3. aad iPhone iyo Nexus 6 xiran fiilooyinka USB. Tag Computer iyo furo Nexus 6.
Tallaabada 4. In Lugood, guji Files > Qalabka > Transfer Iibso s. Markaas, heesaha oo dhan aad soo iibsatay oo videos noqon doonaa on your computer.
Tallaabada 5. Go warbaahinta Lugood ee folder kombiyuutarka. The badbaadin waddada: C: \_ Users \_ Maamulaha \_ Music \_ Lugood \_ Lugood Media.
Tallaabada 6. Open Music iyo video fayl iyo nuqul aad doonayso music iyo video iyo iyaga nuqul aad Nexus 6.
Xiriirada Transfer iyo Kalandarada ka iPhone in Nexus 6
Waa quruxsan fudud si ay u gudbiyaan xiriirada iyo kalandar ka iPhone in Nexus 6. iCloud sameeya oo aad u. Just tagaan si ay Settings > iCloud > gasho xisaabtaada iCloud. Markaas, shid Xiriirada iyo kalandar si hagaagsan xiriirada iyo kalandar u dhexeeya iPhone iyo iCloud.
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Nexus 6
Tallaabada 1. Land iCloud website iyo saxiixa in xisaab-aad. Riix Xiriirada. In suuqa kala xiriir ah, dooro kooxda xiriir ah oo sax xiriirada aad doonayay.
Tallaabada 2. Tag geeska hoose ee bidixda iyo guji icon qalabka-sida iyo dooran dhoofinta vCard ... Markaas, xiriirada waa la badbaadin doonaa on your computer.
Tallaabada 3. Mount aad Nexus 6 baabuur dibadda adag la cable USB ah. Dul Computer iyo aad u ogaato Nexus 6. Open iyo nuqul ah faylka vCard dhoofiyo card SD ee aad Nexus 6 ah.
Tallaabada 4. aad Nexus 6, u tag Xiriirada app iyo dooran Xiriirada tab.
Tallaabada 5. Tubada icon menu ka tegey inay guriga iyo button aad u hesho liiska menu. Tubada Import / dhoofinta iyo ka USB kaydinta ama Import ka card SD dooran Import marka aad badbaadin file vCard kaarka SD dibadda ah. Markaas, xiriirada iPhone noqon doontaa Nexus 6.
Qaybta 2. Sida loo jadwalka ka iPhone wareejiyo Nexus 6
Ka sokow xiriirada, jadwalka ayaa sidoo kale loo gudbin karaa Nexus 6 via qaybsiga. Shaac wadaagno jadwalka si aad u hesho file jadwalka iyo geliyaan in aad xisaabta Google. Ugu dambeyntii, u hagaagsan account Google on your Nexus 6 si aad u hesho jadwalka iPhone. Read tallaabooyin ay ku jadwalka ka iCloud wareejiyo Nexus 6 .
Ka iPhone Bedelka SMS si Nexus 6
Marka ay timaado in kala iibsiga SMS ka iPhone in Nexus 6, wax way ka yara adag oo murugsan. Qofku waa in uu noqon in qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad caawimaad. Halkan, waxaan idinku leeyahay, sida loo isticmaalo laba barnaamijyadooda Android inay soo saaro SMS ka gurmad Lugood iyo wareejiyo Google Nexus 6. Haddii aad dareento in ay goori adag, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans sameeyo in aad u la click hal.
Tallaabada 1. Open Lugood iyo xiriiriyaan iPhone in computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah.
Tallaabada 2. Markii la ogaado, aad iPhone ka muuqan doontaa galeeysid pop-up of Lugood ah. Riix si aad iPhone si aad u hesho guddi ay gacanta ay ku xaq.
Tallaabada 3. Go guddi saxda ah oo guji Back Up Hadda . Sug ilaa habka gurmad la dhammeeyo.
Tallaabada 4. Isticmaal cable USB ah Buur aad Nexus 6 sida drive dibadda adag. Ka dib markii la ogaado, u tag My computer iyo aad u ogaato Nexus 6. u furan si ay u muujiyaan in ay suuqa kala card SD.
Tallaabada 4. your computer, waxay helaan gurmad Lugood goobta iyo nuqul raad raac aad abuuray hadda xagga daaqaddii SD kaarka aad Nexus 6.
Tallaabada 5. aad Nexus 6, u tag Google Play Store, baadhidooda iyo rakibi iSMS2droid oo kaabta SMS & Soo Celinta .
Tallaabada 6. Run iSMS2droid oo ka jaftaa Database Select iPhone SMS. Markaas, hel oo dooran Lugood gurmad file aad ka hor abuuro. Markaas, ka jaftaa All ama Dooro inay dajiyaan SMS si aad Nexus 6.
Tallaabada 7. Run kaabta SMS & Soo Celinta. On ay screen ugu weyn, tuubada soo celi . Markaas, file SMS muuqan doonaa shaashadda. Hubi file SMS ah oo ka jaftaa OK si loo soo celiyo iPhone SMS si Nexus 6.
Tallaabada 8. Waxaa sameeyay. Hadda, u tag app fariimaha iyo hubi SMS ah laga keeno.
Bedelka Photos ka iPhone in Nexus 6
Qaado boqolaal sawiro aad iPhone? Waa in aad rabtid in lagu wareejiyo si aad Nexus 6, sidaas oo kalena haatan oo markaas waxaad iyaga ku kasta mahad karo. Ma ahan adag tahay in la wareejiyo iPhone photos badbaadiyey ee ku giringiriya Camera in Nexus 6 on computer Windows. Waxaad u baahan tahay oo kaliya cable USB ah si ay u dhoofiyaan si computer ka dibna iyaga nuqul aad Nexus 6. Hoos waxaa ku hage tallaabo-tallaabo. Taga oo waa uu akhrinayey.
Fiiro gaar ah: In sidan, waxa kaliya ee aad ku wareejin kartaa sawirro ku giringiriya Camera ka iPhone in Nexus 6. Si wareejiyo photos synced in aad iPhone, waa in aad gargaar qaar ka mid ah qalab dhinac saddexaad weydii.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone iyo Nexus 6 ilaa computer la cable USB ah.
Tallaabada 2. Markii la ogaado, aad iPhone iyo Nexus 6 lagu rakibayaa doonaa sida drive dibadda adag.
Tallaabada 3. your computer, u tag xisaabinta r. Waxaad arki doontaa wax aad iPhone iyo Nexus 6 hoos Qalabka la qaadan karo. Your iPhone waxaa ku tilmaamay "Apple iPhone" ama "Nancy ayaa iPhone" ama wax u eg in, iyadoo Nexus 6 waxaa loo magacaabay Vivian ee Nexus ama wax la mid ah.
Tallaabada 4. Double guji aad iPhone. In aad suuqa kala iPhone, aad arki doonaa gal DCIM. Waxaa fur oo dhan sawiro aad qaadatay waa xaq waxaa.
Tallaabada 5. Double guji aad Nexus 6 si ay u helaan kaarka SD ee aad Nexus 6. Raadi folder Photos oo la furo. Ama waxaad samayn kartaa folder cusub si loo badbaadiyo sawirrada iPhone.
Tallaabada 6. Hadda, nuqul aad doonayay photos iPhone oo markaas paste in folder la doortay ee aad Nexus 6.
Hagaha kor ku xusan wuxuu kuu sheegayaa sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo Nexus 6 on computer Windows. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad isticmaali kartaa iPhoto ama qabashada Image inay u dhoofiyaan photos iPhone si Mac, iyo qalab loo isticmaalo dhinac saddexaad ah (sida Transfer Android File , MobileGo) si ay u dajiyaan in aad Nexus 6.
Bedelka iPhone Apps in Google Nexus 6
Dhab ahaantii, waa wax aan macquul aheyn in si toos ah barnaamijyadooda ka iPhone wareejiyo Google Nexus 5. Ka dib oo dhan, barnaamijyadooda ku iPhone waa in .ipa, .pxl ama .deb qaabab, taas oo aan u shaqayn karo Google Nexus 6. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyadooda badan iPhone leeyihiin versions Android. Waxaad tegi kartaa suuqa ugu weyn ee Android - Google Play Store si aad uga hesho. Xitaa haddii aan la helin versions Android waxaa laga heli karaa, weli waxaad ka heli kartaa bedel badan.
Articles badan oo ku saabsan Google Taxanaha Nexus
Nidaameed Muuqaalka Xiriirada la Nexus 5
Faylal ay ka PC wareejiyo Nexus 5
Sida loo xidid Google Nexus I9250
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan Xiriirada in Nexus 4
3 Siyaabaha Bedelka Videos ka Your iPhone in iPad aan Lugood
> Resource > Transfer > Content Transfer ka iPhone in Google Nexus 6 habsami leh